IIFAMA ZASEKHITSHINI ZASEKHITSHINI (IZITAYILE ZOMNYANGO, IMIBALA KUNYE NEEMBONO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iifama zasekhitshini zaseKhitshini (Izitayile zomnyango, Imibala kunye neeMbono)
Iifama zasekhitshini zaseKhitshini (Izitayile zomnyango, Imibala kunye neeMbono)
Apha sabelana ngegalari yethu yeefama zasekhitshini zasekhitshini ukukunceda ukhethe eyona mibala mihle, ukugqiba kunye noyilo lwekhaya lakho.
Ukulula, i-aesthetics enomtsalane kunye nesibheno esisezantsi sendlu yasekhitshini yasekhitshini iyaqhubeka nokubamba iintliziyo zabanini bamakhaya kunye nabaqambi ngokufanayo, isenza ukuba ibe yenye yezona zitayile zoyilo zithandwa kakhulu ukuza kuthi ga kulo mhla.Ukufudumala, ukwamkela kunye nokwenza iprojekti yobunzulu belizwe, isitayile sasekhitshini lendlu yenye yezona ndlela zilula kunye nezona ziluncedo.
Ngaphambi kokuba ithathelwe ingqalelo njengoyilo loyilo kunye nesitayile sangaphakathi, isitayile sendlu yasefama yaseMelika yayingaphezulu kwekhaya elisebenzayo-elijongana neemfuno zamafama kunye neentsapho ezijolise kubomi basezifama.
Ngale njongo yoqobo, iindlela ezahlukeneyo zahlanganiswa kuyo yonke le minyaka ukuvelisa ikhaya elisebenzayo. Ngokusisiseko, isitayile sendlu yasefama sibonisa ilifa laso laseMelika ngokusetyenziswa kwezinto ezilula nezingacwangciswanga zoyilo, izinto ezinomtsalane zembali kunye nenkuthazo kwindalo.
Uhlobo lwasekhitshini lendlu yefama lubonakaliswa ngokungathobeki, ngokusebenza nangokuthe ngqo. Ngokwesiko, abantu baya kusebenzisa nantoni na efumanekayo ukwakha amakhaya abo, yiyo loo nto iziphumo zibonakala ngathi zirhabaxa kwaye zirustic. Yonke into yayi-homepun kwaye yenziwe ngesandla, isenza ukuba indawo izive ihlala ngakumbi kwaye ifana nekhaya.
Indlu yaseFama yaseKhitshini yoyilo
Uhlobo lwefama yasekhaya Ikhitshi leMinyango yeKhabhinethi
Iifama zasekhitshini zeKhabhinethi yeKhompyutha
Imibala yeKhitshi yeKhabhinethi yaseKhaya
Iifama zasekhitshini ezineeKhabhathi eziMhlophe
Iingcamango zeKhabhinethi yaseKhaya
Ukuhlangabezana neenkqubo zemihla ngemihla zokuhlala kwindlu yasefama, iikhitshi ezinesitayile sendlu yasefama zenzelwe ukulungiselela iintsapho ezinkulu, ukonwabisa uluntu ngemo yokwamkela iindwendwe kunye nokubonelela ngesixa esikhulu sentuthuzelo.
Ikhabhathi yekhitshi yaba yenye yezona zinto ziphambili kuyilo kwaye yabonisa ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi na indlela yokwenyani yasefama - elula, esebenzayo nesebenzayo.
Apha ngezantsi siphonononga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lweeKhitshi zaseKhitshini zeefama ukukunceda uthathe isigqibo sokuba ingaba i-vibe yabo ebuyisiweyo kunye nomtsalane okhangayo ulungile na kwikhaya lakho. (Ndwendwela eli phepha ukubona uluhlu lwethu olupheleleyo Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini )
Iimpawu zoyilo lwekhabhathi zasekhitshini
Nazi ezinye zeempawu zesitayile sendlu yasekhitshini.
Phantsi uzive - Ngokubanzi, isitayile sasekhitshini sendlu yefama sibonakaliswa kukungazinzi kwendalo kunye nentuthuzelo esikhumbuza ngequla elihle ekhaya. Uhlobo lwekhabhathi ekhitshini ekhitshini lubekiwe umva, luqhelekileyo kwaye alusemthethweni ngokusesikweni xa kuthelekiswa nekhitshi yelizwe.
Uyilo olungathobekiyo - Iifama zasekhitshini zasekhaya zasefama zibonakaliswe kuyilo olulula nolungqalileyo. Ngokungafaniyo neekhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance, ezisindayo kwiinkcukacha kwaye zigxininisa ekuhombiseni, iikhabhathi zasekhitshini zasekhitshini zinemigca elula egxunyekwe ngamatye acocekileyo kunye neepaneli.
Izinto zendalo - Kanye nje ngesitayile sekhabhathi yelizwe, isitayile sekhabhathi esekhitshini sithatha ukhuthazo kwindalo kwaye sijolise ekuziseni ngaphandle ngokusebenzisa izinto zendalo ezinje ngemithi eqinileyo.
Isibheno seRustic kunye nekhaya - Uhlobo lweefama zasekhitshini zasekhitshini ezinesibheno esomeleleyo se-rustic. Izinto ezirhabaxa kunye nezinto ezigqityiweyo kwindalo yazo zisetyenziswa kakhulu kwisitayile sasekhitshini. Inxalenye yoyilo lwekhabhathi yasekhitshini yendlu yasekhitshini iyancedisa ii-decors ezinje ngezinto ezenziwe ngesandla kunye nezinto zeediliya.
Ukubuyiselwa kweenkuni kunye nee-aksenti zokuvuna - Inkuni efunyenweyo isetyenziswa njengendawo yokubeka iikhabhathi zasekhitshini.
Ukuchukumisa okubhaliweyo - Olunye uphawu oluphambili lweendlela zasekhitshini zasendlini yefama, ngokubanzi, zigqityiwe ngombala kunye nomgangatho, oqheleke ngokwendalo kwizinto zendalo.
Ukuchukunyiswa okubhaliweyo kuhlala kufakwe kwisitayile sekhabhathi yasekhitshini ngokusetyenziswa kwezinto ezixubekileyo ezinje ngeglasi yokufaka, ukubuyisela kwakhona iinkuni kunye nezinto ezinqunqiweyo.
Imibala emhlophe kunye nokukhanya - Umbala wombala oqhelekileyo wekhabhathi yasekhaya yasekhitshini iikhabhathi zinomoya kwaye ziqaqambile, zisebenzisa imibala emhlophe kunye nokukhanya njengombala ophambili wesitayile sendlu yasekhitshini.
Ukusetyenziswa kwemathiriyeli yendalo kunye nomphezulu ikwaluphawu lwentengiso lokwenyani lendlu yasekhitshini. Izinto eziphambili zokwenza indlu yasefama iikhabhathi zasekhitshini zizinto zomthi eziqinileyo zendalo.
Ngokungafaniyo nekhabhathi zekhitshi zale mihla ezihlala zibonisa izinto zokwenziwa ezinjengelaminates okanye ithermofoil, iikhabhathi zekhitshi zasendlini yefama zisebenzisa kakhulu imithi kuyo yonke uyilo.
Kungenxa yokuba isitayile sasekhitshini sendlu yefama senzelwe ukudala imeko-bume ethambileyo kwaye ijolise ekungeniseni ngaphandle, kusetyenziswa izixhobo zendalo.
Umgangatho onzima womthi onjenge-cherry, i-maple, i-oki kunye neentlungu zezona zikhetho zithandwa kakhulu kwikhabhathi yasekhitshini yasekhitshini. Ukuba icherry ngumthi otyikityiweyo wesimbo sobugcisa iikhabhathi zekhitshi kunye ne-oki ifana nesitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini, ipayini yeyona nto uyithandayo ngokwesiko kwikhabhathi yesitayile sekhitshi.
Ipayini luhlobo lomthi othambileyo onombala otyheli wendalo. I-Pine kuphela kohlobo lwe-softwood olusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi kwaye xa kuthelekiswa nomthi onzima, iipayini zentsimbi ngokulula.Nangona kunjalo, amandla kunye nomgangatho wayo zihlala ziqiniswa ngonyango loxinzelelo ngaphambi kokusetyenziswa.
Iindidi eziqhelekileyo zepine ezisetyenziselwa isitayile sendlu yasekhitshini ikhabhathi yipine emhlophe emhlophe kunye nepine emhlophe yaseNtshona.
I-Pine lukhetho oludumileyo lweendlela zasendlini yefama iikhabhathi zasekhitshini kuba ukubonakala kwayo njengeqhina kuyenza ilunge ngokugqibeleleyo isibheno esezantsi sendlu ye-rustic, isitayile sendlu yasefama.
Ipayini inokushiywa kumbala wayo otyheli okanye inyangwe ngamabala eenkuni ukufezekisa ithoni eyahlukileyo. Ngaphandle koko, ipineyini inokupeyintwa ngombala omhlophe okanye nakweyiphi na indlu yasekhitshini umbala wekhabhathi njengoko ithatha kugqitywa kakuhle. Inkqubo ye- indlu yefama yanamhlanje isitayile sasekhitshini saziwa ngokujolisa kwakhona nangokunika izinto ezindala inkangeleko entsha. Ukwenza injongo kwakhona kudala ukuziva okuvela ngexesha kwaye kunikezela isibheno esinamandla ngakumbi kwindawo yasekhitshini yasekhaya.
Enye into ethandwayo yohlobo lweefama zasekhitshini zasekhitshini kukuphinda kube yimithi. Iinkuni ezixinzezelekileyo okanye iinkuni ezihlanguliweyo ziingceba zomthi ezindala okanye iiplanga ezisetyenzisiweyo ezisetyenziselwa injongo entsha yokwenza ifanitshala entsha, ikhabhathi, izimbo zokuhombisa okanye izixhobo endaweni.
Inkuni efunyenweyo inokusetyenziswa kwisitayile sasekhaya sefama yokubeka ikhitshi ngeendlela ezininzi. Nokuba ziingcango zekhabhinethi okanye iiyunithi ezivulekileyo zishelufa, iinkuni ezixinzezelekileyo zibonelela ngesibheno esingaphezulu. Ingasetyenziselwa njengesigqubuthelo somthi sokuhombisa ukufihla uluhlu lweephedi, imibhobho kunye neenkqubo zokukhupha ikhitshi.
Ukugqitywa koyilo lwekhabhathi yasekhitshini
Ngokubanzi, isitayile sasekhitshini sendlu yasefama sikwaziwa ngokuyila okungathobekiyo kunye nesibheno sexesha elifanelekileyo. Unoko engqondweni, izindlu zasekhitshini zasekhitshini zasendlwini zihlala zishiyekile ekugqityweni kwazo kwendalo, okanye ziphathwe ngepeyinti ekhanyayo, endaweni yokugqunywa ngezinto zokwenziwa ezinje ngee laminates zoxinzelelo oluphezulu.
Ipeyinti yeyona nto iphambili yokugqibezela indlu yasekhaya yefama iikhabhathi zasekhitshini. Ngokungafaniyo nekhabhathi yokhitshi ekhitshini ebeka ipremiyamu kubumnyama bendalo, izityebi, iinkuni ezinzima, okanye isitayile selizwe esikwabonisa ukhuni ekugqibeleni, isitayile sendlu yasefama sibekelwe bucala ikhabhinethi yaso emhlophe nebala.
Ipeyinti emhlophe, ngakumbi, yeyona ndawo igqitywayo iqhelekileyo yeefestile zasekhitshini zasekhitshini. Ngelixa kwezinye iimeko, ezimhlophe zithathelwa indawo yimibala e-mellow enje nge-beige, imhlophe, ukhilimu okanye imibala ethambileyo emthubi, iiblue powdery, grey epholileyo kunye ne-lavender. Uyakwazi ukufumana okungakumbi malunga nemibala eqhelekileyo yeefestile zasekhitshini zasekhitshini njengoko siqhubeka neli nqaku.
thandanani iivesi zebhayibhile
Ipeyinti yesitayile sendlu yasekhitshini iikhabhathi zihlala ngokucacileyo, zomelele kwaye zigudile. Ukugqitywa kwesiqhelo kudala ubuchule obulula ngakumbi kunye nokungaqhelekanga, ngelixa usebenza njengokugqibelela kokuhombisa kwe-rustic kunye nezinye izinto ezirhabaxa kunye nokugqitywa.
Iifama zasekhitshini zasekhaya zasekhaya ezifama azinasiphelo sigqibeleleyo nesindilisekileyo sekhabhathi yelizwe laseFrance. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko uxinzelelo lukwasetyenziswa ukuba ukubonakala kokudala kunqweneleka. Ukubandezeleka kudala ukubonakala okuqinisekileyo, okuqaqambileyo kwaye kufanelekile ukuba ujonge kwizinto zakudala kunye nokuhonjiswa kweediliya.
Olunye ugqibelelo oludumileyo lwekhabhathi yasekhitshini yasekhitshini yifama eluhlaza okanye engagqitywanga. Ukujonga kwendalo okanye okungagqitywanga kwendlu yasefama iikhabhathi zasekhitshini zihlala zisetyenziselwa ukwenza isibheno esirhabaxa. Umthi wepayini, umzekelo, ujongeka ulungile ekugqityweni kwawo kwendalo kwaye xa uphathwa ngengubo ecacileyo yokhuni lomthi, amaqhina endalo kunye neenkozo ziyaqaqanjiswa.
Ukuthambisa kungasetyenziselwa ukugqibezela indlu yasefama iikhabhathi zasekhitshini. Ngaphandle kwamabala acocekileyo enza ukuba ipateni yokugaya ibonakale kunye nombala weenkuni, iikhabhathi zasekhitshini zasekhitshini zasendlini zinokuphathwa ngamabala amnyama aphakathi ukuya kumnyama ukubanika umbala omtsha.
Nangona kunjalo, ukungcola akusasetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwikhabhathi yasekhitshini yasekhitshini xa kuthelekiswa nopende omhlophe.
Ezona nkcukacha ziqhelekileyo zisetyenzisiweyo kuyilo lwekhabhathi yasekhitshini yoyilo
Nazi ezinye zeenkcukacha zokuhombisa ezisetyenziselwa isitayile sekhitshi ekhitshini:
Ukubumba okulula - Xa kuthelekiswa noyilo lwekhabhinethi yelizwe laseFrance, iinkcukacha kwisitayile sasekhitshini zasekhitshini azinzima kangako emehlweni.
Ukuhonjiswa okunokuhonjiswa ngeeprofayili ezilula kunokufumaneka kwiphaneli yeziko leengcango zekhabinethi yasekhitshini okanye ngaphezulu komjikelezo wekhabhathi zekhitshi ezingaphezulu.
Ezi zinto zibunjiweyo zenziwa kunye neefestile ezifumaneka ekhitshini ukugxininisa umlinganiso wazo kunye nokubanika udumo.
Isimbozo seplanga -I-hood hood yenye yeendawo eziphambili zokubonisa iinkcukacha zendlu yasefama. Uphawu lwentengiso lwasekhitshini lendlu yasekhitshini zizinto zokugubungela ezenziwe ngamaplanga, uyilo lwazo lwalusekwe kwiziqwengana ezimfutshane zomthi ezibuyiswayo zadityaniswa kunye ukuze zenze isigqumathelo.
Izixhobo zoluhlu lwee hood zihlala zenziwe ngentsimbi kwaye ukuze zilingane nendawo yokumisela ikhitshi ngokwesiko.
Izembozo zomthi ezenziwe ngamaplanga zongezwa ngaphezulu kwesitovu ngaphezulu ukwenza ukufana okungaphezulu, okungaguquguqukiyo ngelixa kusenziwa umsebenzi ofanelekileyo wokufihla i-ducting, imibhobho kunye neenkqubo zokukhupha ikhitshi.
Izikhuselo zeenkuni zokhuni zinokuba zihombise kakhulu okanye zicace, kodwa ekhitshini yesitayile sendlu yasefama, zihlala zenziwe okanye zibuyiswa ngomthi kwindawo yendalo ukuze zilungele isibheno se-rustic sale ndlela yekhabinethi yasekhitshini.
Ikwathatha iimilo ezahlukeneyo ezinje ngobume bebhokisi elula okanye imilo enee-tapered, ethi ibaleke ukusuka eluphahleni iye ezantsi ukuya ekuphelisweni kwebala.
Ibhodi yebhodi -Iipaneli zebhedi yebhodi yinto edumileyo yendlu yasefama, ilizwe kunye nendlu yamakhaya aphefumlelweyo. Iipaneli zebhedi zoluhlu luchungechunge lweeplanga ezinde, ezimxinwa zomthi ezidityaniswe ndawonye kwindawo emi nkqo.
Isetyenziswa ngokwesiko njengonyango lokuhombisa udonga, kodwa kamva yaziwa njengeyilo lomnyango wekhabhathi.
Ngaphandle kokusetyenziswa njengonyango lwendlu yasefama iingcango zekhabinethi, iipaneli zebadibhodi zinokongezwa njenge-backsplash, eneenkcukacha zobuso besiqithi esikwiindonga okanye iindonga zesandi sokufaka umtsalane welizwe ekhitshini. Unokufunda ngakumbi malunga Iingcango zekhabethe yebhodi yebhodi njengoko siqhubeka neli nqaku.
Vula amashalofu - Iishelufa ezivulekileyo zihlala zongezwa kwisitayile sekhitshi ekhitshini yokubonisa izixhobo ze-rustic kunye nezinto ezincedisayo ezinje nge knick knacks kunye ne-dinnerware ekhethiweyo, izinto zokupheka okanye izinto zokuhombisa ezinje ngejagi zamason.
Uhlobo lwefama yasendlwini ekhitshini iingcango zekhabinethi ziyaziwa ngokuba mnandi kunye nokungaqheleki okanye ukubuyisela umva vibe. Uyilo lwayo lusisiseko ngakumbi kwaye alusemthethweni ngokusesikweni ngokuthelekiswa neenkcukacha ezityebileyo zelizwe laseFrance eliphefumlelweyo kuyilo lwekhabinethi yekhitshi.
Uyilo oluthe tye lwendlu yefama yasendlwini ekhitshini iingcango zekhabinethi zihlala zigxininiswa ngeenkcukacha ezilula njengokufakwa kweglasi okanye iphaneli yamabhodi ebhodi.
Nazi izinto ezithandwayo zoyilo lomnyango wekhabhathi zasekhitshini ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwiifama zasekhaya zasekhaya iikhabhathi zasekhitshini:
Iingcango zekhabinethi yesitayile esihlukumezayo - Iingcango zekhabinethi yesitayile se Shaker lolunye lweempawu zempawu zempawu zasekhitshini.
Ngokwenkcazo, isitayile somnyango wekhitshi likaShaker ngumnyango oziqwenga ezintlanu onepaneli yeziko ebuyisiweyo.
Nangona isetyenziswa ikakhulu kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje oluphefumlelweyo, iingcango zeshabin zesitayile sekhitshi ziyintandokazi ekhitshini lendlu yefama ngenxa yomtsalane wazo, i-aesthetics elula kunye nesibheno esibuyisiweyo.
Umnyango wekhabhathi wesitayile esi-Shaker ujongeke ucocekile, obenza ukuba babe ngumdlalo ogqibeleleyo wokuzithoba okungathobekiyo wekhabhathi yasekhaya yefashoni iikhabhathi zekhitshi.
Iifama zasekhaya zasekhitshini zasekhitshini ezinesitayile se-shaker iingcango zekhabethe zihlala zenziwe ngomthi onzima onje nge-maple, i-oaksawnok oki okanye i-hickory edla ngokushiyeka ekugqityweni kwayo kwendalo.
Ngenye indlela zinokupeyintwa ngombala omhlophe okanye okhanyayo ngombala ukunika iikhitshi zesitayile sendlu yefama imvakalelo engaphezulu.
Iingcango zekhabhathi zesitayile seBadboard - Iingcango zekhabinethi yesitayile seBeadboard kukukhangela okusayinwe kwelizwe, indlu yasefama kunye nekhitshi yesitayile sendlu.
Ngokwesiko isetyenziswa njengonyango lokuhombisa udonga kumagumbi okuhlambela, amakhitshi kunye namagumbi okuhlala ngaphambi kokutyabeka kunye nodonga olomileyo oludumileyo, iphaneli yebhodi yebhodi yomqolo luluhlu lwamaplanga emithi emxinwa athe nkqo nkqo. Isiqwenga somthi ngasinye sinomqolo omncinci phakathi kunye nokudibanisa apho iplanga ngalinye lidibana khona libizwa ngokuba ngumtya.
Iipaneli zeBeadboard zenziwe ngokwesiko kusetyenziswa ulwimi kunye nokunxibelelana kwe-groove ukudibanisa ngokugqibeleleyo iziqwenga zeeplanga kunye kwiphaneli enye efanayo enezilaydi ezimileyo.
Nangona kunjalo kwiminyango yekhabhathi yebhodi, iigroves okanye iirges zibhalwe nje kwiphaneli esembindini yomthi ukulingisa ukubonakala kweepaneli zebhedi yebhodi yemveli.
Ngokwesiqhelo, iingcango zekhabhathi zekhitshi yeebhedi zekhabhathi zekhabhathi zohlobo lweefama zipeyintwe ngombala omhlophe okanye opeyintwe ngombala okhanyayo. Banikela ngerustic kunye ne-cottage charm emakhitshini, ibenza bazive bephulukene namakhaya kwaye bonwabile. Iingcango zekhabinethi zekhitshi ye-Beadboard zifana nelizwe eliqhelekileyo.
Nangona kunjalo, kukho into enye enkulu yokubuyela umva ekusebenziseni iibhodi zentsimbi iingcango zekhabinethi ekhitshini, kulondolozo olufunekayo. Iigroves kunye neeslats phakathi komnyango wekhabhathi kunokuba nzima ukuzicoca, njengoko ubumdaka kunye nokungcola kunokubambeka ngokulula, kodwa ukosula kancinci, isitayile sakho se-beadboard isitayile seminyango yekhabhinethi inokugcina ubuhle bayo bendalo.
Iingcango zekhabhinethi yeglasi - Iingcango zeglasi zekhabethe zingasetyenziselwa njengeengcango ezigxininisayo ukuqaqambisa isahlulo sendlu yasekhitshini ekhitshini yekhabhathi, okanye inokusetyenziselwa ukubonelela ngodonga olupheleleyo lwekhabhathi zekhitshi ngaphezulu.
Iingcango zeKhabinethi ezifakwe ngeglasi ecacileyo zihlala zisetyenziselwa ukubonisa izinto zokupheka, izitya zedinala kunye nezikhongozeli zechic ukubonisa umxholo wasekhaya. Ukongeza, iingcango zekhabhathi yeglasi zikwanika izindlu zasekhitshini ikhitshi evulekileyo nomoya ovulekileyo. Ngokwendlela yokusebenza kunye nokufikeleleka, iingcango zekhabhathi yeglasi zikwanika ukubonakala ngokupheleleyo kokuqulathwe ngaphakathi kwisitora, yiyo loo nto kulula ukukhangela into oyifunayo.
Iglasi ecacileyo lolona hlobo lweglasi oluqhelekileyo olusetyenziselwa isitayile sendlu yefama iingcango zekhabinethi. Ngaphandle koko, iiglasi ezikhokelwayo okanye iipaneli zeglasi ezinamabala zingasetyenziswa njengeengcango zendlela yasefama yasekhitshini yekhitshi yokwenyani yendlu yasefama. Ukuphucula ukubonakala kunye nokusebenza kweengcango zekhabhathi yeglasi yeefestile zasekhitshini zasekhitshini, umsebenzi okanye ukukhanya kwangaphakathi kwikhabhathi kungongezwa.
Iingcango zekhabinethi yocingo lwenkukhu - Iifama zasekhitshini zasendlini yefama ziyaziwa ngesibheno sabo sasekhaya kunye nokwenza ilizwe elingaphezulu kwaye ilizwe lifama njenge-vibe, iingcango zekhabinethi ngamanye amaxesha nazo ziyaphathwa ngeengcingo zenkukhu.
Le ikwayindlela elungileyo yokunika iikhabhathi zekhitshi ezikhoyo uhlaziyo lwerustic. Ukutshintsha iingcango zekhabinethi zekhitshi esele ikhona kunye nocingo lwenkukhu olubotshelelwe kwisakhelo yinto ekhawulezayo, elula kunye nendleko efanelekileyo yokwenza isitayile sendlu yefama.
Olunye uyilo oludumileyo lwekhabhathi yeminyango yekhabinethi esetyenziselwa isitayile sasekhaya sefama iikhabhathi zasekhitshini zivalwe iingcango zepaneli, iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo kunye neengcango zepaneli ezicabaleleyo
Ihardware yasekhitshini yasendlini yefama ihlala ine-antique kunye neprofayili elula. IKhabinethi iyatsala, inamaqhina nezibambo ayinayo indawo yokuhombisa kakhulu, kodwa endaweni yayo ithe tye kwaye iyasebenza.
Iindidi eziqhelekileyo zehardware yekhabhathi yendlela yasendlwini yekhitshi iikhabhathi zitsala ngocingo, amaqhina indebe kunye nokutsala umgqomo. Ukutsala ngocingo ziziphatho ezilula ezisetyenziselwa iingcango zekhabhathi, ngelixa ikomityi kunye nokutsalwa kwemigqomo kuqhele ukusetyenziselwa iidrawer.
Iikhonkco, kwelinye icala, zizixhobo ezincinci zekhitshi lekhitshi eziqhotyoshelwe kwiingcango zekhabinethi yekhitshi okanye ubuso beedraw busebenzisa enye. Ngokuqhelekileyo zijikeleze imilo, kodwa zize nezinye iifom ezinje ngesikwere, uxande, i-oval, ikristale okanye ubutsha.
Uhlobo lwefama yasendlwini yekhitshi yamaqhina aneemilo ezilula kwaye zihlala zenziwe ngetsimbi ekugqibeleni kombala omnyama. Kukwakho nolunye uyilo olusebenzisa iporcelain kunye neenkuni. Iikhonkco zohlobo lwekhabhathi zasekhitshini zasekhitshini zinokubandakanya uyilo oluprintwe kumphezulu njengeentyatyambo, iipateni zegingham, umqhagi njl.
Imigqomo yendebe kunye nokutsala sisixhobo sokutyikitya kwesiko lekhabhathi yekhitshi, kodwa endaweni yokuba isetyenziselwe iingcango zekhabinethi, ezi zisetyenziselwa abakhi. Umtsalane wabo wakudala kunye nobuhle beediliya babenza ukuba babe zizixhobo ezifanelekileyo zekhabinethi yohlobo lweefama zasekhitshini zasekhitshini.
Imigqomo yendebe kunye nokutsalwa kubonakaliswa ngesiqingatha senyanga okanye imilo setyhula. Imigqomo yendebe kunye notsalo zifakelwe icala elivulekileyo lijonge ezantsi kwaye umalume uvule kwaye aphathe, oku kunokusebenza kwelinye icala.
Kukwakhona nezixhobo zekhabhathi zekhitshi ezenziwe ukuba zilingane ngokuthe ngqo kwisitayile sendlu yasefama kwaye ezi zoyilo zihlala zibonisa iinkcukacha ezinomdla kunye nezomxholo welizwe njenge-rooster motif encinci, okanye ipatheni egingham eprintiweyo okanye isakhelo esenziwe ngepeyinti seentyatyambo.
Abanye baneeplati zangasemva zokuhombisa ezinemininingwane eqingqiweyo kunye nokusikwa. Ngaphandle kwesinyithi, i-porcelain kunye neglasi zizinto ezithandwayo zesitayile sendlu yasekhitshini yezixhobo zekhabinethi.
Ukugqitywa kwesitayile sendlu yasekhitshini izixhobo zasekhitshini
Ukugqitywa kwesitayile sendlu yasekhitshini izixhobo zekhabinethi ngokubanzi zijongeka zindala, zirhabaxa, zibekelwe ixesha elimnyama kwaye zimnyama ngombala.
Ihardware yasekhitshini emnyama emnyama kunye emnyama isetyenziswa rhoqo kunye nekhabhathi yasekhitshini yasekhitshini. Imibala eyomeleleyo emnyama kwindawo enzulu, efudumeleyo enika imvakalelo yembali kwaye ivelise umahluko omkhulu kunye nemibala emhlophe yasendlini yefama iikhabhathi zasekhitshini.
Ezinye zezinto ezigqityiweyo kugqityiwe kwifama yasendlini yasekhitshini izixhobo zekhabinethi zezi:
Mnyama - Umnyama ngumbala ophambili wesitayile sendlu yasekhitshini yehardware. Umnyama wenza isitetimenti esomeleleyo kwaye unikezela umahluko kumbala wokukhanya otyikityiweyo wesitayile sendlu yasekhitshini. Izixhobo zekhabhathi ezimnyama zasekhitshini nazo zinemvakalelo yokuvuna kunye neyakudala
Ibronze yaseVenice - Umbala wekhabhathi yentsimbi yekhabhinethi yobhedu imnyama kakhulu ukuba iphantse yasondela kumnyama. Kodwa olunye lweempawu zalo ezizodwa kukubonakala kweetoni zangaphantsi ezimdaka ngombala. Ngokwenkangeleko, ubhedu waseVenetian umnyama kunobhedu.
Njengomatshini wekhitshi omnyama wekhitshi yentsimbi, ubhedu waseVenetian ikwabhangqa kakuhle kunye nefestile yendlu yasekhitshini yekhitshi kuba izisa into ethe kratya yokungafani. Xa ubhangqiwe yifama yasekhitshini yasekhitshini yekhabhathi, iVenetian bronze ikhabethe yentsimbi yongeza i-rustic vibe eyomeleleyo.
Ioyile yeRubhusi yeoyile -Ibronze yebrashi yebrashi ibonakaliswa ngombala omnyama kakhulu ovela kumbala wetshokholethi enzulu ukuya kumbala ongwevu ngombala wobhedu. Ilinganisa ukubonakala kobhedu oludala ngokusebenzisa iikhemikhali kwaye xa kuthelekiswa nobhedu lwaseVenetian, Ibronze yebrashi yeoyile inombala okhanyayo kunye nomphezulu ongaphezulu.
Umbala omnyama weoyile yokurabha ubhedu ngumdlalo ogqibeleleyo kumhlophe kunye ne-beige enefreythi yendlu yasekhitshini yasekhitshini
Endala - Ihardware yakudala yekhitshi yasekhitshini isetyenziswa kakhulu kwikhabhathi yemveli yekhitshi ngenxa yeLizwe eliDala, imbali kunye nexesha lokuziva. Inkangeleko yabo ye-rustic ibenza bakhethe ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo i-aesthetics emxinwa yesitayile sendlu yasefama iikhabhathi zasekhitshini.
Ihardware yasekhitshini yakudala yekhitshi enophawu lwentengiso yetshokholethi enzulu ilungeleleneyo ngombala okhanyayo kunye nomhlophe wasefama wesitayile sekhitshi.
Uhlobo lwasekhitshini lendlu yefama konke malunga nokudala umoya opholileyo kunye nokuqikelela imeko yokuziva ubuyile. Ukwenza imeko enjalo, umbala wephalethi wasekhitshini lendlu yasekhitshini ulula kwaye uyakhanya ngokubanzi, kwaye kulula ngakumbi emehlweni.
Awuyi kubona ubunzulu obunzulu, obucekeceke obuchanekileyo kwisitayile selizwe laseFrance, kodwa endaweni yoko iifama zasekhitshini zasekhaya azithathi cala. I-whites, i-grays, i-shades emdaka zizinto eziphambili kolu hlobo lwesitayile sasekhitshini. Ngelixa imibala egxininisayo ihlala ithobekile ukukhuthaza imeko ye-cheery kunye nesitayile esinomtsalane.
Iifama zasendlini zasekhitshini zisebenzisa kakhulu abamhlophe kumbala wayo wonke wombala, yiyo loo nto ikwangumbala ithandwayo wekhabhathi yekhitshi kolu seto. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezidityaniswe nezinto zomthi we-rustic zifana nesitayile sasekhitshini.
I-Beige, iikhrimu kunye nabamhlophe abangasasebenziyo zisetyenziswa ngokubanzi xa kuthelekiswa nemithi emnyama.
Ezinye iindlela zendlela yasendlini yefama ekhitshini imibala yekhabinethi ithambile, i-shades ethulileyo njengamagqabi apholileyo, iiblues ezithambileyo, i-beige kunye ne-taupe elula.
Ukugqitywa kweenkuni zendalo kuqhelekile kwisitayile sasekhaya sefama iikhabhathi zasekhitshini. Ukukhanya kunye nomthi ophakathi phakathi kunye neepateni ezibalaseleyo zokucoca ziyathandwa ngakumbi ekuboniseni ukonwaba kwendalo kunye nokufudumala kwindawo.
Iifama zelizwe zasendlini zasekhitshini zihlala zihlala zishiywa zingagqitywanga ngemibala yazo eyahlukileyo yendalo okanye ziphuculwe ngamabala emithi. Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwasekhaya lwefama ekwakhiweni kwendalo nako kunika ukuziva okungaphezulu kwesithuba.
Umhlophe ngumbala wotyikityo wekhabhathi yasekhitshini yasendlini yefama. Iikhabhathi ezimhlophe ngokubanzi zinceda ukwenza iikhitshi zesitayile sendlu yasefama zive ziqaqambile kwaye zinomoya. Ngaphandle komtsalane weklasikhi weprojekthi yekhabhathi yekhitshi emhlophe yasefama, zikwanokubukeka okungaqhelekanga xa kuthelekiswa nemithi emnyama, enzima kunye necebileyo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, iifama zasekhitshini ezinamakhabhathi amhlophe zilula emehlweni xa kuthelekiswa neekhitshi ezineekhabhathi zendalo ezigqityiweyo okanye ezinamabala. Zijongekile ngokusesikweni kwaye zibonelela ngokudibeneyo kunye nokuguquguquka ngokwendlela yoyilo.
Ukusetyenziswa kweekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini yindlela yokumisa isendlini esefama evumela umninikhaya ukuba axube ngokulula kwaye atshatise umhombiso, ifanitshala kunye nempahla kwisithuba.
Ukongeza, iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zasendlini yefama nazo zidibene kakuhle nayo nantoni na, ke umntu unokuzama ngokulula imibala yodonga, i-flooring kunye ne-backsplash material, ngokunjalo. Ikwabonelela ngendlela elungileyo yokwazisa eminye imibala eya kongeza ubomi ngakumbi ekhitshini lendlu yefama.
Uhlobo lwekhabhathi yasekhitshini ekhitshini lendlu yasefama nayo iyahambelana kakuhle nangalo naluphi na uhlobo lwekhitshi lekhabhathi yekhitshi, ekuvumela ukuba wenze umahluko okanye ukuvumelana ngaphakathi kwisikimu sombala xa sisonke.
Isishwankathelo, isitayile esimhlophe sefama yasekhitshini sisebenza njengendawo yangasemva engathathi hlangothi eyenza imeko eguqukayo yokwazisa ukutshiza kombala kuyo yonke iphalethi yakho.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zasendlini esefama zikwakhona zilungele iikhitshi ezincinci njengoko zinokudala ukukhohlisa kwendawo enkulu. Uhlobo lwekhabhathi yasekhitshini ekhitshini lendlu yasefama nayo ikhupha ukukhanya kwendalo ngcono, ngaloo ndlela yenza ukukhanya okukhanyayo, okuhlaziyayo kunye nomoya ekhaya.
Olunye uncedo oluphambili lokusebenzisa iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zasendlini yefama kukuba aziphelelwa lixesha kwaye zingqinisisiwe ukuba azisayi kuphuma kwisitayile. Ngokukodwa xa ubhangqiwe ngee-browns kunye nemithi yendalo, olu manyano lwakudala lunokuma kuvavanyo lwexesha.
Ngenye indlela kumbala oqaqambileyo okhanyayo we-white, beige, i-creams kunye ne-white white ingasetyenziselwa njengombala wepeyinti kwiifayile zasekhitshini zasekhitshini. I-Beige ine-tinge etyheli kancinci eyongeza isixa esifihlakeleyo sobushushu kwimibala yemibala, ngelixa isebenza njengesiseko esingathathi hlangothi.
Ke malunga nokudibanisa kunye nokuhambelana nezinto, izinto zokuhombisa kunye neefenitshala, iikhabhathi zasekhitshini zasendlini yefama nazo zilula ukusebenza nazo.
Olunye ukhetho oludumileyo lwekhabhathi yasekhitshini yasendlini yefama kukugqitywa okumhlophe okuxineneyo, apho umphezulu wekhabhathi uphantsi kwesanti ephindaphindayo kunye noxinzelelo, emva koko ugqunywe ngengubo ephezulu ye-antique glaze.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezixineneyo zingasetyenziselwa ukuba ufuna ukunika ixesha elifanelekileyo lokuziva okanye ukubhena. Ngenye indlela, iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zasendlini zasefama nazo zinokushiyeka kwindawo ethe tyaba, egqibeleleyo kwaye ifaniswe nezixhobo ze-antique ukuba imeko enqwenelekayo iyafuneka.
Ukongeza umdla kwiikhitshi zesitayile sendlu yasefama kunye neekhabhathi ezimhlophe, qiniseka ukudibanisa ikhabhathi kunye neempawu zomthi. Ezi zandi zomthi zinokwaziswa njengesigqubuthelo somthi, njengokuhombisa okanye njengokuhombisa.
Ukudibanisa isitayile esimhlophe sefama yasekhitshini nekhabhathi kunye neempawu zomthi zenza umahluko kunye nokwahluka, okwenza indawo ingabi buthuntu kwaye iyadika.Ukusetyenziswa koburhabaxa kunye nokuncedisa izinto zendalo kunokunceda ukuphucula ubuchule be-rustic ekhitshini lendlu yefama eneekhabhathi ezimhlophe.
Ukuvelisa iseti ephefumlelweyo engaphezulu, isibini indlu emhlophe yasefama ekhitshini yasekhitshini enezinto zokukhanya ezinamatye endalo anje ngelitye lekalika, ilitye lesepha okanye imabhile.
Ngaphandle koko, faka ibhloko ye-butcher okanye i-countertop yeplanga yokuhamba kunye neefestile ezimhlophe zefestile. Imhlophe kunye nomdaka zithathwa njengezintandokazi kwindlu yoyilo yekhitshi ngenxa yefuthe lendalo elinikezela kwisithuba.
Isitayile selizwe lasekhitshini, ngokubanzi, saziwa ngokufudumala kunye nentuthuzelo, esahlukileyo ukubhenela emhlabeni, ukubonwa kwendlu kunye nokusetyenziswa okuninzi kwezixhobo zendalo, ke, ubukhulu becala, isitayile selizwe nekhitshi lendlu yasekhitshini ziyafana ngeendlela ezininzi. .
Amasebe esitayile ekhitshini aphuma kukhuthazo olwahlukeneyo njengelizwe lesiNgesi, ilizwe laseFrance, indlu yasefama yelizwe, njl. Xa kuthelekiswa nelizwe lawo laseFrance kunye nelizwe lesiNgesi, isitayile sendlu yefama yelizwe sinika i-vibe ebuyiselweyo ngakumbi kunye nomoya wasekhaya.
Ilizwe laseFrance libukeka limnyama, linzima kwaye lijongeka njenge-antique. Ngelixa ilizwe lasekhaya lasefama iprojekthi yasekhitshini ikhangeleka ngakumbi kusetyenziswa ukusetyenziswa kwekhabhathi yekhitshi elula, imiphezulu yeetafile zamatye zendalo, ukubuyisela kwakhona izandi zomthi, amalaphu e-plaid kunye ne-gingham, izitya ezenziwe ngomthi, izitya zomasoni, iinkonkxa zeetini zeediliya, izixhobo zasefama zakudala, ifama ukuhonjiswa kwezilwanyana kunye nomsebenzi wobugcisa.
Isishwankathelo, bajongeka bengaphantsi kwesiko, banesimo esincinci esisesikweni nesikhaphukhaphu esinika iindwendwe uvakalelo lokwamkela noluthuthuzelayo.
Ukuba isayinitsha yendlu yasefama yasekhitshini ikhangeleka ngathi yikhabhathi emhlophe epeyintiweyo, iikhabhathi zasekhitshini zelizwe zasekhaya zisebenzisa iinkuni ekugqityweni kwendalo. Esi sitayile sekhabinethi yasekhitshini sidibanisa uyilo olungathobekiyo olunezinto zendalo, uburhabaxa bokwenza ubuhle obunoburhabaxa kunye nomtsalane we-rustic.
Iifama zelizwe zasekhaya zasefama zasekhitshini nazo zinokuhonjiswa okuncinci kodwa endaweni yoko zibeka phambili ekusebenzeni, ekusebenzeni, kwintuthuzelo kunye nokuphila okulula.
Eminye iminyango eqhelekileyo yekhabethe eboniswe kwiLizwe laseFama laseKhitshini iikhabhathi ziingcango zepaneli ezicabaleleyo, iingcango zesitayile sikaShaker, iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo kunye neengcango zepaneli ezivalekileyo.
Izinto ezilula zokuhombisa kunye nokubumba okuhombisa okuhamba ecaleni kwemida yeepaneli zombindi nangaphezulu kweekhabhathi ezingaphezulu okanye iikhabhathi ezisisiseko zikwasetyenziselwa ukuhombisa kolu hlobo lwesitayile sekhabhathi yasekhitshini.
Ngamanye amaxesha, ukongezwa kobuchwephesha kongezwe kulwakhiwo lwekhitshi lekhabhathi yasekhaya ngokusebenzisa iinkcukacha ezityebileyo kunye nemikrolo ebonisa indawo yokuhlala yasefama kunye nolungiselelo lwabefundisi.
Iifama zelizwe zasekhitshini zasekhitshini nazo zijolise kulwakhiwo olomeleleyo oluqinisekisa ukuba iikhabhathi zihlala ixesha elide. Ukuqinisekisa ukuba iikhabhathi zasekhitshini zekhaya zihlala ixesha elide, izinto zendalo ezinje ngomthi onzima zisetyenziswa kakhulu kwaye zilunge ngokufanelekileyo ngexesha lokwakha.
Iifama zelizwe zasendlini zasekhitshini zihlala zakhiwe ngomgangatho ophezulu wokhuni oluqinileyo njengecherry, oki, imephu, redwood, fir kunye nepine.
Ukudala ikhitshi lokwenyani lendlu yaseFama ayifuni kuphela ikhabhinethi eyenzelwe kakuhle, kodwa ikwafuna ukuqwalaselwa kwezona nkcukacha zincinci kwisithuba. Ukuzisa loo ntuthuzelo yasekhaya ekhayeni lakho, faka ezi zinto zilandelayo kwikhabhinethi yakho yasekhitshini. Nazi ezinye izindlu zasefama zokuyila iikhabhathi zoluvo lokuzama ikhaya lakho:
Indlu yasefama ekhitshini lokuntywila ngesitayile seApron.
Yongeza indlu yokufama - Inqaku elibalulekileyo kwisitayile sekhitshini lasekhitshini yindawo enzulu, isinki enkulu enefaskoti enkulu. Ngokubanzi inkulu ngobukhulu xa kuthelekiswa neesinki eziqhelekileyo kwaye ihlala ikhwele ngaphezulu kweekhabhathi ezisisiseko.
Ngokwesiko, isitayile sendlu yasefama yayenzelwe ukugcina isixa esikhulu samanzi ngelixesha laliselandwa emithonjeni okanye kumanzi akufutshane. Yayisetyenziswa ngokwesiko ukulungiselela ukutya okukhulu, ukuhlamba iimbiza ezinkulu neepani, ukuhlamba iimpahla okanye ukuhlamba nosana.
Umbono osemva kwesitayile sendlu yasekhitshini isinki kukwenza ukuba ukusetyenziswa kume ngqo phambi kwesinki, kungekho countertop okanye ikhabinethi phakathi.
Izitayile zesitayile sendlu yasefama zithandwa kakhulu kule mihla kwaye ziyafumaneka kwimarike. Zenziwe nge-porcelain, i-cast iron okanye i-stainless steel kwaye yomelele kakhulu.
Isiqithi esinokuphathwa kunye nomthi weplanga
Sebenzisa ibhloko yebhloga okanye imiphezulu yeetafile eyenziwe ngomthi - Iikhabhinethi ezimhlophe zasekhitshini kunye neebhloko zokunqanda izitya zokudibanisa ziyindibaniselwano yeklasikhi yekhitshi yesitayile sendlu yasefama.
Eyona nto uyithandayo kwikhitshi yokwenyani yefama yasekhaya, iibhloko zebheki zongeza ubushushu bendalo kunye nokuqina, ngelixa uzisa ngokwahlukileyo kwikhabhathi emhlophe yasekhitshini kwindawo. Ukongeza kwi-aesthetics, iibhloko ze-butcher kunye neetafile zokhuni zihlala zizinzile kwaye zinokusebenza ngemisebenzi eyahlukeneyo ekulungiseleleni ukutya njengokuxova intlama kunye nokusika izithako.
Bonisa izixhobo zokuvuna kunye nesitayile sendlu yefama kwikhabhathi evulekileyo - Uhlobo lweefama zasendlini iikhabhathi zasekhitshini zihlala zidityaniswa kunye nezinye izinto ze-rustic kunye nokuhombisa ukubonisa ezo zihlukileyo zekhaya.
Ii-aksenti zeediliya kunye nezinto ezindala ezisefashini zikwaboniswa kwiikhabhathi ukwenza ukuba abantu baziva ngakumbi. Yongeza iikhabhathi zasekhitshini zasendlini yefama ene-dinnerware elula, i-cookware kunye ne-flatware ezilungelelaniswe ngokudityaniswa okumnandi okanye ubonise iitoti zakudala nezokuvuna. Izimbiza zeMason lolunye uphawu lwento yokwenyani yesitayile sendlu yasefama.
Ikhitshi lokuloba ibhokhwe ekhitshini
Yongeza umnxeba wokuhonjiswa kwenkuku - Ukuhonjiswa kwemiqhagi kufumaneka ngokufuthi kwindlu yasefama kunye nasekhitshini lesitayile selizwe ukubonisa ukuhlala emaphandleni okanye indlela yokuphila yasefama.
Zihombise imiphezulu yeetafile yekhitshi, iishelfu ezivulekileyo kunye nekhabhathi enezinto zokuncedisa ekhaya zokufaka i-chic kunye nokudlala.
Ukuhonjiswa komqhagi kuyafumaneka njengemifanekiso eqingqiweyo, ubugcisa bentsimbi, umsebenzi wobugcisa okanye ukupeyinta okanye izinto ezinje ngeejagi, iziphathi zethishu, isitya sangokuhlwa, iglasi kunye nezinye izixhobo zasekhitshini. Ihlala isetyenziswa njengoshicilelo lwamalaphu kunye nefenitshala ethambileyo njengetawuli zeti, amakhethini, abaphathi beembiza, njl.
Yongeza ubume be-rustic vibe ngakumbi - Ukwenza umahluko kubume, hlanganisa izinto ezahlukeneyo ukugqibezela ukujonga iikhitshi zesitayile sendlu yefama.
Sebenzisa iinkuni ezilukhuni okanye ezingagqitywanga, ilitye lendalo kunye nezinye izinto ezinokongeza ubunzulu kunye nobukhulu kuyilo olupheleleyo lwendawo.
Ukwenza ithoni phantsi kobunzima kunye nokongeza isiqabu sokwamkela ekhitshini lendlu yefama, faka izityalo kunye neebhasikithi kwiitafile, iishelufa ezivulekileyo kunye nekhabhathi.
Buyisela izinto ezindala - Umtsalane ungongezwa ekhitshini yokwenyani yendlu yefama ngokusebenzisa izinto ezindala ngenjongo entsha.
Iziqwenga ezindala ezinje ngeejagi eziphinde zenziwa zasebenza, iibhotile, iitoti zentsimbi, iinkuni ezindala zinikwa ubomi obutsha njengenxalenye yokuhombisa kwisitayile sekhitshi lekhabhathi.
Sebenzisa iinkuni ezihlanguliweyo okanye ezihlanguliweyo - Ngokudibanisa nokuphindaphinda, iinkuni ezindala kunye nezisetyenzisiweyo zinokusetyenziswa njengezivakalisi ekhitshini lendlu yefama ukuyinika ukuziva ngakumbi.
Yenza ingxelo ekhitshini lakho usebenzisa ukhuni oludala njengesandi sodonga, into yokuhombisa okanye yokubumba okanye njengesigqubuthelo somthi. Ungayisebenzisa ukwenza into enkulu ekhitshini lakho njenge-bar okanye indawo yesiqithi okanye encinci eyakhiwe kwibhokisi yesidlo sakusasa.
Ngenye indlela, iinkuni ezibuyisiweyo zinokusetyenziswa njengemitha evulekileyo yokwenza isilingi ukwenza imeko yendalo ngakumbi ekhitshini lendlu yefama.
Izitulo zebrust zeenkuni ezinesihlalo esinokuhlengahlengiswa
Ngenye indlela, i-shiplap inokusetyenziswa njengenxalenye yesitayile sendlu yasekhitshini. I-Shiplap luhlobo lwebhodi yeplanga edla ngokusetyenziswa njengendawo yangaphandle yokwakha izakhiwo ze-rustic ezinjengeendawo zokuhlala kunye nolwakhiwo lwesibini olufana neeshedi kunye neebarn.I-Shiplap inenkangeleko engagqitywanga kwaye isarhe ngokurhabaxa.
I-spruce engafakwanga yenye yeendlela ezingabizi kakhulu zomkhumbi. Iyahluka kakhulu malunga nokusetyenziswa kwaye ayisebenzi kuphela kwizicelo zangaphandle kodwa nakwangaphakathi nayo.
Sebenzisa i-shiplap njengodonga lweendonga zekhitshi lendlu yefama okanye uyisebenzise ukukhulisa ubuso besiqithi sekhitshi esisembindini werustic. Iikhikhini zomkhumbi Apha.
Itafile zefama yeenkuni ekugqityweni kombala we-driftwood
Gcwalisa isitayile sekhabhathi yasekhitshini kunye netafile yefama -Ukuba isithuba semvume yakho yasekhaya, dibanisa iikhabhathi zasekhaya zasekhaya zasekhitshini zasekhitshini ezineetafile zasefama zakudala.
Iitafile zefama zenziwe ngamaplanga amade eemithi ezikumgangatho ophezulu ezifana ne-oki, ezidityaniswe ngokudibeneyo ukwenza ifanitshala eyomeleleyo. Tshatisa iitafile zasefama nezitulo ezinemilenze okanye umqolo obonisa iinkcukacha ezityebileyo kunye nemikrolo yendlu yasefama kunye nemiboniso yabefundisi.
Uyilo lweKhitshi yelizwe - Ingcibi yekhitshi - Iingcamango zeKhitshi yaseKhaya - Uyilo lweKhitshi yaseRustic - Iziqithi zeWood Kitchen ezifunyanwa kwakhona
ezona ndawo zokungcebeleka kubandakanya iqela le-bachelorette
izimvo zesipho somolokazana